Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny permafrost | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Azo antoka fa efa nandre izany ianao mivaingan'ny hatsiaka,. Izy io dia sosona amin'ny tany ambanin'ny tany izay ny vovoky ny tany ary mihamangatsiaka maharitra noho ny toetrany sy ny toetrandro nahitana azy. Ny anarany dia avy amin'ity hatsiaka maharitra ity. Na dia mangatsiaka maharitra aza ity sosona ambanin'ny tany ity dia tsy rakotra ranomandry na ranomandry tsy tapaka izy io. Izy io dia hita any amin'ny faritra misy toetrandro mangatsiaka sy periglacial.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fananganana ary ny vokadratsin'ny fiempoana permafrost.
2 Fa maninona no mampidi-doza ny mangalatra permafrost?
3 Vokatry ny fihenan'ny permafrost
Ny permafrost dia manana vanim-potoana ara-jeolojika ankoatry ny 15 arivo taona. Na izany aza, satria ny fiovan'ny toetrandro dia mampiakatra ny maripana antonony manerantany, ity karazana tany ity dia atahorana hitsonika. Ny fitrandrahana tsy an-kijanona an'io permafrost io dia mety hiteraka vokatra isan-karazany izay ho hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Io no iray amin'ireo loza lehibe indrindra hitanay teo amin'ny fiovan'ny toetrandro tao anatin'ity folo taona ity.
Ny permafrost dia mizara roa sosona. Etsy andaniny, manana ny pergelisol isika. Ity no sosona lalina indrindra amin'ity tany ity ary vaky tanteraka. Etsy ankilany, manana ny molisol isika. Ny molisole no sosona ambonin'izay indrindra ary azo esorina mora kokoa amin'ny fiovan'ny maripana na ny toe-piainana iainana ankehitriny.
Tsy tokony afangaro amin'ny ranomandry ny permafrost. Tsy midika izany fa tany rakotry ny ranomandry izy, fa tany mangatsiaka. Ity tany ity dia mety ho mahantra indrindra amin'ny vato sy fasika na manankarena amin'ny zavatra biolojika. Izany hoe, ity tany ity dia afaka manana rano be dia be na mety tsy misy ranon-javatra ao anatiny.
Hita any ambanin'ny tany saika ny planeta manontolo amin'ny faritra mangatsiaka kokoa izy io. manokana Hitanay izany any Siberia, Norvezy, Tibet, Kanada, Alaska ary nosy any amin'ny Ranomasimbe Atlantika atsimo. Eo anelanelan'ny 20 sy 24% amin'ny tany fotsiny no misy azy io ary somary latsaky ny any an'efitra. Ny iray amin'ireo mampiavaka an'ity tany ity dia ny fiainana afaka mivelona eo amboniny. Amin'ity tranga ity dia hitantsika fa ny tundra dia mivelatra amin'ny tany permafrost.
Fa maninona no mampidi-doza ny mangalatra permafrost?
Tokony ho fantatrao izany mandritra ny an'arivony sy an'arivony taona maro permafrost dia tompon'andraikitra amin'ny fanangonana tahiry karbonina voajanahary. Araka ny fantatsika, rehefa maty ny zavamananaina dia mihasimba ho zavatra organika ny vatany. Ity tany ity dia mitroka ny zavatra organika manana karbaona maro ao aminy. Midika izany fa ny permafrost dia nahavita nanangona karbonina voajanahary manodidina ny 1.85 miliara taonina.
Rehefa hitantsika fa manomboka miempo ny permafrost dia misy olana lehibe vokatr'izany. Ary ity fizotran'ny ranomandry mitsonika ity dia midika fa ny karbaona biolojika rehetra tazomin'ny tany dia avoaka amin'ny endrika metana sy gazy karbonika any amin'ny atmosfera. Ity fiempoana ity dia miteraka rivotra entona miakatra amin'ny atmosfera. Tsaroantsika fa ny gazy karbonika sy ny metana dia entona mitahiry trano roa miaraka amin'ny fahaizana mitazona hafanana amin'ny atmosfera ary mitombo ny mari-pana manerantany.
Misy fandinihana tena ilaina izay tompon'andraikitra amin'ny fandraketana ny fiakaran'ny maripana ho fiovan'ny fihenan'ny karazan'ireny entona etona roa tonta eny amin'ny habakabaka ireny. Ny antony lehibe mahatonga an'ity fandinihana ity dia hadihadio ny vokatra eo noho eo amin'ny ranomandry permafrost miempo. Mba hahalalana an'io fiovan'ny maripana io dia tsy maintsy manadihady ny atitany ireo mpikaroka mba hitrandrahana santionany vitsivitsy hahafahana manoratra ny habetsaky ny karbaona biolojika ao aminy.
Miankina amin'ny habetsahan'ireny entona ireny dia azo soratana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Miaraka amin'ny fiakaran'ny maripana marobe, ireo tany efa nihena nandritra ny an'arivony taona maro ireo dia nanomboka nihombo tamin'ny taha tsy hay tohaina. Ity dia rojo famahanana tena. Izany hoe, ny fihenan'ny permafrost dia mitombo ny mari-pana izay, avy eo, dia vao mainka hihalevona ny permafrost. Avy eo tonga any amin'ny teboka izay hiakatra tampoka ny maripana antonony.
Vokatry ny fihenan'ny permafrost
Araka ny fantantsika, ny fiovaovan'ny toetr'andro dia fehezin'ny fiakaran'ny maripana manerantany. Ireo maripana antonony ireo dia mety hiteraka fiovan'ny toetr'andro ary miteraka fisehoan-javatra miavaka. Trangan-javatra mampidi-doza toy ny haintany maharitra sy mahery, fitomboan'ny tondra-drano, cyclone, rivodoza ary trangan-javatra miavaka hafa.
Tao amin'ny vondrom-piarahamonina siantifika dia napetraka fa ny fiakaran'ny mari-pana manerantany 2 degre Celsius dia hiteraka fatiantoka ny 40% amin'ny velaran'ny velarantany permafrost. Satria ny fitrandrahana ity gorodona ity dia miteraka fahaverezan'ny rafitra, lasa matotra be izy io satria manohana izay rehetra ambony sy mandritra ny fiainana ny gorodona. Ny fatiantoka ity tany ity dia midika hoe very izay rehetra amboniny. Voakasik'izany koa ny fanamboaran'olombelona sy ny ala ary ny tontolo iainana.
Ny permafrost hita any atsimon'i Alaska sy atsimon'i Siberia dia efa mitete. Izany dia mahatonga ity faritra iray manontolo ho marefo kokoa ity. Misy ny ampahany amin'ny permafrost izay mangatsiaka kokoa ary milamina kokoa any amin'ny latitude avo kokoa any Alaska sy Siberia. Ireo faritra ireo dia toa voaro tsara kokoa amin'ny fiovan'ny toetr'andro tafahoatra. Ny fiovana mahery vaika dia nandrasana tao anatin'ny 200 taona ho avy, fa rehefa miakatra ny maripana dia mifankahita mialoha izy ireo.
Ny fiakaran'ny maripana avy amin'ny rivotra any amin'ny Tendrontany Avaratra dia mahatonga ny permafrost ho levona haingana kokoa ary ny fitaovana organika rehetra hanaparitaka sy hamoaka ny karbônina rehetra any amin'ny habakabaka amin'ny endrika etonazy.
Manantena aho fa ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny permafrost sy ny vokatry ny fiempoany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fiovan'ny toe-trandro » mivaingan'ny hatsiaka,